Date My Pet » Matauriro Aungaita Vakadzi Kana Muri Shy?
Muri anonyara mukomana uye drawback uku zvako waitwa kuti kusaroora makore ose aya.
Ko pamusoro apa tsanangura ako ezvinhu? Uri kutsvaka nyore-to-zvandakatonga, asi nzira dzinobatsira kuti kubvisa dambudziko? kana hongu, Kurukurirano pazasi kunofanira kukubatsira.
Kukurira kunyara, uchava kuva nokutenda pachako uye mugumo zvinoverengeka zvinogona kukubatsira kuzadzisa kutenda. Verenga kuziva chii chaizvo unofanira kuita.
Ichokwadi kuti munhu anogona kuchinja chitarisiko chake. Semagumo, munhu haagoni kuita chinhu sei anoyevedza anotarira, asi iye anogona zvirokwazvo kuita zvimwe zvinhu kuti kutarisa nechivimbo.
Zvinonzwisisika kuti uri kutadza kutaura mukadzi upi nokuda kunyara kwako, asi chinhu chimwe unofanirawo kunzwisisa ndechokuti hapana mumwe mumwe kupfuura iwe (uye vanhu zvimwe vashoma pedyo kwazvo newe) anoziva kuti uri munhu anonyara.
saka, unogona kuedza nyore pakuvhenganisa nevanhu vasina kuvarega kunzwisisa kuti uri mumwe wevaya dzakachengetedzwa (verenga nyara) varume vanenge vagara vakagara kure vasikana. Izvi zvichaita kuti zvive nyore kuti kuvanza bashfulness yako; kamwe iwe kushandisa kuita ichi ichizvivanza zvinobudirira, iwe vachangoerekana kutanga kunzwa nechivimbo.
Kutarira nechivimbo unofanirawo pfungwa zvishoma munzira yaunopfeka. Dzivisa akapfeka nguo kuchaita kuti haazobvumiri kuti mumire kunze kwechaunga. Aihwa, hamungambovi vanofanira kupfeka fluorescent mudhebhe avo uye hembe rakajeka chitsvuku kuonekwa pakati pechaunga. Just sarudza zvipfeko dzenyu wedzeredzei nenjere; kana ukapfeka mbatya kutarisa zvakanaka pamusoro penyu, iwe vachangoerekana anofarirwa pfungwa vakadzi vakakupoteredza.
Kuva musoro zvinangwa
Uri kuronga Woo zvikuru mukurumbira uye chinonyanya kukwezva musikana kumativi? Somunhu anonyara murume, unofanira kurega kuedza kuti.
Ichokwadi kuti kunyara kwako kuchaderedza yekudyidzana kamwe paunotanga kutarisa nechivimbo, asi hazvirevi kuti mava kuchenjera zvekukukwezva ari Hottest musikana kumativi.
musikana upi zvake nechekare dzakakurumbira uye inozivikanwa nokuva chinonyanya kukwezva munhu muboka rake zvinowanzoita chivimbo kwazvo. The chivimbo iwe vakaungana ichangopfuura kwazvo haangakwaniri kusvika musikana akadaro; varo chivimbo achaputsa yenyu nguva zvauchasangana kuswedera kwaari.
saka, Chinangwa chenyu chinofanira kuwana musikana chinokodzera unonzwisisa; nguva dzose kudzivisa kusvika vakadzi kukutyisidzira.
Regai kuzeza kusanganidzana maziso
Paunenge pakupedzisira kutaura munhu, regai kuzeza kusanganidzana maziso. Vakadzi kuti wooed nyore kana munhu unocherekedza maziso avo pasina chinovhiringidza.
Ichi chi, zvisinei, zvimwe anonyara murume basa yakaomesesa inogona nokusingaperi kukumbirwa kuita; asi, kamwe Danho Rokutanga i.e. vaswedera mukadzi vayambuka uchava kuisa ako nokuedza kuyambuka raitevera.
Kusanganidzana maziso ari nyore zvikuru pane zvauri chaizvoizvo kuzvitutumadza. Pashure kusanganidzana maziso, edza kuramba nayo kwemaminitsi mashoma; kwokutanga kutya kwako zvirokwazvo zvisisipo.
The apa Mazano kunofanira kukubatsira ubude goko pakati kunyara. Other pane mazano anotevera aya, uchigonawo kushanda kuvandudza unyanzvi hwako zvokukurukura uye kwokugeza mazino pfungwa dzako zvinosetsa.